आजको राशिफल : जेठ २४ गते शनिबार (जुन ६) को राशिफल हेर्नुहोस्
June 6, 2020 1306
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) खा’नपान तथा वातावरणकाे ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने ग्रहयोग रहेकोछ । सरकारी काम गर्दा सचेत रह’नुहोला काम बिग्रने तथा दण्ड तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । व्यवसा’यमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुनाले दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् । मित्र तथा आफन्तको सल्ला’ह नमान्दा दुख पाइनेछ । साझपख अध्यय’नमा मन जानेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) चलि आएका परम्परालाई समयसापेक्ष परि’वर्तन गर्न सकिनेछ। प्रशंसक’हरू बढ्नेछन्। इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुन सक्छ। विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइनेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। परिवार’जनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिलो भएर जानेछन् । साझपख भौतिक सम्प’तीको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) जीवन शैली व्यस्त रहेपनि आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ । कुनैपनि विवादमा सामेल नहुनु’होला हुलमुलमा फस्ने तथा नराम्रा परिणामको सामना गर्नु पर्नेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभ’न्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा चिसोपनको विकास हुनेछ ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा मामा माव’ली पक्षसँग नजिक नहुनु तथा आजको दिनसँगै काम नगर्नु नै राम्रो रहेकोछ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) सबैको सहयो’ग पाइने हुनाले काम गर्न जोस जाँगर आउनेछ । सामाजिक काममा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ भने सबैले त’पाईको क्षमताको कदर गर्नेछन् । पढाइ लेखाइ अन्य दिन भन्दा सुधार हुने हुनाले आफन्तहरु खुसी हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । तरपनि वाहि’री वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) अध्ययन’मा समय दिन नसस्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ भने अरुकै लागि श्रम तथा शक्ति खर्च हुनेछ । रमाइलो वातावर’णमा पनि मन खिन्न हुनेछ । साथीभाइ तथा आफन्तसँग विवाद बढ्ने योग रहेकोछ ध्यान दिनुहोला । प्रेम’मा एक अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्दा वैमनश्यता बढ्नेछ । आमा तथा आफन्तसँग टाढिने योग रहेकोछ । साझपख व्यापारबाट न्युन आम्दा’नी गर्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) समयमा होश नपुग्ना’ले खर्च मात्र हुनेछ। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । मेहनत गर्दागर्दै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न मुस्कि’लै पर्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई वेवास्ता गर्नाले पनि दुःख पाइनेछ । आफ्नै कम’जोरीले काममा बाधा हुने सम्भावना देखिन्छ । आफन्त तथा दाजुभा’इबाट सहयोग पाइने छैन भने विवाद बढ्ने योग रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) पतिपत्नी’बीचको मधुर प्रेमाभावले दाम्पत्य जीवन सुखद हुनेछ । इष्टमित्र सहयोगी बन्नेछन् । बोलीमा मधुरता झल्कनेछ भने भाग्यशक्ति सुदृढ रहनेछ । पापीय मनोवृति बिस्तारै हट्दै जानाले मन प्रफूल्लित बन्नेछ । नो’करीमा ख्याती बढ्ने कार्यको सर्वत्र प्रशंसा होला । राजनी&तिले समाजमा सुयोग्य र कर्मठ बनाउला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) मन पर्ने वस्त्र, अलंकार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइ’एला । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । आत्म–विश्वास बढ्नेछ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । पढाइ लेखाइ प्रग’तिकै बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । साथीभाइ तथा आफन्तको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरस’फाइमा ध्यान दिनुहोला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) हुन तथा बन्ने निश्चय भएको काम अचानक बिग्रन सक्छ। लगा’नी, दौडधुप, श्रम र प्रयत्नको उचित मूल्य नपाइने समय छ। । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खंदा राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भू’मिमा हुनुहुन्छ भने सर’सफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला । रुपैयाँ पैसा फस्ने योग रहेकोछ ख्याल गर्नुहोला । साझपख समयमा सुधार भएर रा’म्रा काम गर्न सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) दाजुभाइ तथा आफन्तकाहरुले सहयो’ग गर्नेछन् । भविष्यका लागि काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्री’मा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । तरपनि साझपख वाहिरी वातावरण तथा सरस’फाइमा ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) सामा’जिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्या’पारमा मन्दि आउ’ने तथा घाटा लाग्नेछ । तरपनि समाजसेवा तथा राजनीतिमा जनताको साथ नपाइने हुँदा पद प्राप्तीको योग टरेर जानेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सफल’ता पुर्वक जीम्मेवारी सम्पादन गर्न सकिने हुनाले नाम तथा कमाउन सकिनेछ । साथीभाइ तथा आफन्तका साथ रमा’इलो वातावरणमा दिन बित्नेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले प्रतिस्पर्धिमाहरु भन्दा अग्र स्थानमा तपाईको नाम आउनेछ । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमि’मा हुनुहुन्छ भने सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
Prevघ्यू कुमारीको यी फाईदा थाहा पाएपछि तपाईं भन्नु हुन्छ :आहा घ्युकुमारी ! पढेर शेय’र गर्नु’होस्
Nextयी हुन् : बलिउडका ५ दाजुभाई र दिदीबहिनीको जोडी ! थाहा पाउनुहोस्..
पल शाह प्रकरणमा बोलिन् मोडल रियासा दाहाल पनि, लेखिन् फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस
आज सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्